50 Askari oo Maamulka 'Jubbaland' looga Dilay Weerarkii istish-haadiga ahaa ee ka dhacay deegaanka Sanguuni.
Dowladda Faransiiska oo iclaamisay howlgal ka dhan ah masaajidda Muslimiinta.
Ciidamo katirsan Melleteriga Itoobiya oo isku dhiibay Suudaan.
Xiisado ka dhashay 8 Xildhibaan oo Xasaanadda lagala noqday ayaa ka taagan Garoowe.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda Weerar ka dhacay Gaarisa.
Dad ka badan 2730 ruux oo maalin qura cudurka Carona ugu dhintay dalka Mareykanka.
Qaraxyo Askar lagu dilay oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
Saturday June 09, 2018 - 19:02:03 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya deegaanka Baar Sanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in camaliyad istish-haadi ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ay ka dhacday xeradii maalintii shalay ahayd lagu dilay askarta Maraykanka
Wararka ka imaanaya deegaanka Baar Sanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in camaliyad istish-haadi ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ay ka dhacday xeradii maalintii shalay ahayd lagu dilay askarta Maraykanka ah.
Camaliyadda Istish-haadiga ah ayaa dhacday galabta casirkii waxaana lala beegsaday maleeshiyaat katirsan maamulka Axmad Madoobe kuwaas oo xerada looga tegay markii ay ciidamadii Mareykanka iyo Kuwii Kenyaatiga ay iskaga carareen.
Dadka deegaanka Sanguuni ayaa sheegay in ay waxyar kadib salaadii Casir ay maqleen qarax aad u weyn oo ka dhacay xerada maleeshiyaatka Soomaalida ah ay soo degeen, ayna sidoo kale arkayeen holac aad u weyn iyo uuro ka baxaysa gudaha xerada.
War kasoo baxay Taliska Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka uu ahaa Camaliyad Istish-haadi ah, islamarkaana uu ka dhacay bartamaha xerada, halkaas oo lagu dilay in ka badan 50 ka tirsan Maleeshiyaatkii halkaas ku sugnaa.
Maalintii shalay ayay ahay markii weerar loo adeegsaday madaafiic iyo qoryaha boobayaasha culus ah iyo gantaalaha garbaha laga rido ay Mujaahdiiintu ku weerareen xeradan oo ay markaan ku sugnaayeen saraakiil iyo askar Maraykan ah, halkaas oo lagu dilay hal askari oo Ameerikaan ah afar kalena lagu dhaawacay.
Qarax 14 Askari Kenyaan ah ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Mandheera.
Weerar Sarkaal ciidan lagu dilay oo ka dhacay duleedka degmada Cadale.